Farm & Zoo Block Toysvagadziri & Vatengesi | BanBao
Kumba > Zvigadzirwa > Big Building Blocks > Farm & Zoo Block Toys
The thepurazi uye zoo kuvaka block toy ndeimwe yeyakawanda-yekupedzisira-yekukwira kuvaka block block toys inogadzirwa neBanbao. Banbao inyanzvi yekuvaka yekuvaka toy mugadziri, kutarisa vana'Sucellectual kuvandudzwa uye kunogadzira nhevedzano yekuvaka block toys toys kune vana, kusanganisira purazi uye zoo block matoyi.
Mhuka Kuvaka Mabhawa toy inoda kuti vana vashandise kuvaka zvidhinha kuti vavake mhuka yemhuka, iyo inogona kushandisa vana's maoko-pane kugona uye kuwana dzidzo uye yekutanga dzidzo. Panguva imwecheteyo, purazi uye zoo block toys yakagadzirwa neBanbao ine mavara, kubvumira vacheche kuti vaone mavara paunenge uchitamba. Uyezve, vacheche vanogona zvakare kuwedzera ruzivo rwavo mhuka kana vachivaka purazi uye zoo block matoyi.